Iindaba-Faka endaweni ye "isihluzi" somcoci wamanzi ekhayeni lakho. Khumbula ukubuya uze kusela "amanzi acocekileyo"!
Faka endaweni ye "isihluzi" somcoci wamanzi ekhayeni lakho. Khumbula ukubuya uze kusela "amanzi acocekileyo"!
Ngoku iimeko zokuphila zabantu ziya ziba ngcono kwaye zingcono, kwaye baqalisile ukulandela umgangatho wobomi. Nokuba uyatya, uyasela okanye uyabusebenzisa ebomini, kufuneka ube usempilweni, kwaye ukuba kukho imfuneko, uya kusebenzisa oomatshini abathile ukunceda, ukuze uqiniseke ukuba izinto eziyimfuneko mihla le zikhuselekile kwaye zisempilweni.
Amanzi yinto ebaluleke kakhulu kubomi bethu, kwaye ngoku abantu abaninzi bayaqala ukuthathela ingqalelo ukhuseleko lokusetyenziswa kwamanzi. Ngokubanzi, amanzi asemakhayeni ethu athuthwa zizityalo zamanzi ngemibhobho. Olu hlobo lwamanzi lubulala iintsholongwane kwaye lubulala iintsholongwane, kodwa ezinye iigesi okanye iintsholongwane ziya kuhlala emanzini, kwaye kuya kubakho umhlwa kwimibhobho yamanzi. Ukuphalaza, kwaye ke oko kuya kungena kubomi bethu ngombhobho kunye nokuhamba kwamanzi.
Kungenxa yezi zizathu ukuba amakhaya amaninzi ngoku afaka izinto zokucoca amanzi ukunceda ukucoca izibonelelo zamanzi. Kuba isicoci samanzi siqulathe isihluzo, inokufunxa ukungcola kunye neebhaktiriya ezikwimpompo yamanzi, ukuze izixhobo zamanzi ezinyangwe ngumcoci wamanzi zikhuseleke kwaye zicoceke xa kuselwa okanye kuphekwa. Nangona kunjalo, ngenxa yokuba isihluzo sisetyenziselwa ukuhluza, isihluzi kufuneka sibuye sitshintshe. Kufuneka itshintshwe kangaphi?
Kule mihla, iintlobo zokucoca amanzi kwiimarike zahlukile, kunye nokusetyenziswa kwendalo kwezinto zokucoca ulwahlulo kwahlukile, kwaye ixabiso lolunye uhlobo lokucoca indawo yokucoca lahluke kakhulu. UHuahua namhlanje ukuxelela ukuba kukangaphi ukubuyisela ezi ntlobo zintathu zeefilitha kwimarike. Impilo!
1. Icebo lokucoca ulwelo elisebenzayo
Sonke siyazi ukuba i-carbon eyenziwe yasebenza enes adsorption esomeleleyo, ke abavelisi abaninzi babahlambululi bamanzi bayisebenzisa njengeyona nto iphambili yokucoca amanzi. Ngokubanzi, xa yenziwe icarbon isetyenziswa njengecebo lokucoca ulwelo, kufuneka yahlulwe yicarbon yangaphambi kokusebenza kunye nekhabhoni yangaphakathi, ukuze la manqanaba mabini asetyenziswe kunye ukufunxa ivumba elingaphezulu kunye nechlorine kubutyebi bamanzi. Nangona kunjalo, ikhabhoni esebenzayo iyakugcwaliswa emva kokusetyenziswa kwexesha elide, kwaye ihlala ifuna ukutshintshwa rhoqo kwiinyanga ezintandathu ukuya kunyaka omnye.
I-PP yomqhaphu luhlobo lwento ecoca amasuntswana amakhulu emanzini, njengaluphi uhlobo lwentlenga kunye nokungcola kwesinyithi kunokuxhomekeka kuyo ukuvimba ngaphandle komnyango. Ilingana ne-gauze, esongelwe kumbhobho ukunceda i-debris ye-filter, kuba izinto ezihluza zinkulu kakhulu, ke ubomi benkonzo buya kuba bufutshane kunamanzi angenayo, malunga neenyanga ezi-4 eziza kwenziwa zibuyiselwe.
3. I-membrane ye-Ultrafiltration
Xa usiva igama le-membrane ye-ultrafiltration, kuya kufuneka uyazi ukuba ivolumu yento eyihluzayo ihlala incinci. Emva kokuba icociwe, amanzi etephu anokuguqulwa ngokupheleleyo abe ngamanzi amsulwa. Ngenxa yomgangatho wayo osezantsi wokucoca ulwelo, ixesha elitshintshiweyo liya kuba lide, ngesiqhelo kube kanye kuphela kwiminyaka emibini.
Xa kusetyenziswa isicoci samanzi, eyona nto ibalulekileyo kukubala isihluzi, ke kufuneka sibuyisele kwaye sicoce ngexesha, ukuze siqiniseke ukuba singasela amanzi acocekileyo ngalo lonke ixesha!